Xilliga kulaylaha | | U dabbaaldega farshaxanada Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Taariikhda xagaaga ee guriga
Taariikhda kuleylaha waa qalabka dayactirka xagaaga! Tareenka dayrta ee xagaaga waa caadada ka timaada Palatinate iyo sidoo kale gobollada kale ee ku dhow. Iyada oo leh madadaalo farxad leh oo jilicsan xilliga qaboobaha waa la eryey, horeyna wuxuu sidoo kale u lahaa dhaqanka dhimashada.
Dhaqanka maalinta xagaaga
Xilliga xagaaga ayaa xasuusta nolosha cusub, gu'ga iyo sida bilowgii wareegga cusub. Iyada oo ku xiran bulshada, tareenka maalinlaha ah ee xagaaga ayaa ka dhacaya Paster, caadiyan Axadda saddexaad ka hor Easter.
Maalinta xagaaga ee Tinker ayaa isqorinaya
The caadadii jidka caan Kurpfälzer, ayaa aad u badan tahay in xididada jaahilka iyo waxaad ka heli caddayn isaga waqtiga King Sun ah, Louis XIV. Hadday tahay si kastaba ha ahaatee horeba siiyey maalintii xagaaga midabo Geli ka dibna, lama yaqaan. Ka dib markii Sommertagszug jiilaalka lagu gubay qaab snowman a Rafaa ee lanooga weyn.
Waa maxay maalinta xagaaga?
Maalinta xagaaga ee qoraxda waa ulo fudud, halkan waxaa loogu yeeraa Stecken, oo leh qalab casri ah. On sare ee fadhiya pretzel khamiir iyo mararka qaarkood xitaa ukunta cayayaan sida calaamad u ah nolosha cusub iyo guga - halkan waxaad arki kartaa xiriirka Easter!
Magaalooyinka qaar, tufaaxa ama bouquets yar yar waa caado u ah maalinta xagaaga. Iyada oo qoraalada xagaaga midabada leh ee gacmahooda, caruurtu waxay la socdaan noocyada qurxinta ee naadiyada kala duwan. Ugu dambeyntii, dabcan, pretzel macaan ayaa la cuni karaa - loogu talagalay ugu yar ee dabcan, muhiimadda weligeed ah!
Oo halkan yimaadaa tilmaam sahlan oo ku saabsan sida loo sameeyo maalin xagaaga midabka midabka leh. Tani waxay kor u qaadaysaa niyadda gaar ahaan marka barafka cagaaran ee weli aan rabin in la siiyo habab iyo carruurtu waxay mar hore ku riyoodaan midabada guga.
Marka hore, waxaad u baahan tahay waxyaabaha soo socda: bir ah foorno ama bamboo (taas oo sidoo kale laga heli karo dukaanka ubaxa), mindi jeebka, ukun la soo daadiyo, pretzel khamiireed (rabbi ahaan laftiisa la dubay!), qaansooyinka ama waraaqaha miisaanka.
Ugu horreyn, waxaad usheegtay usbuucii ugu dambeeyey ee aad ku dhajisey barafka (waxaad soo iibsatay ama horeyba u sameysay). Haddii aad doorbideyso inaad isticmaasho warqadda crepe, waxaad sidoo kale ku qurxin kartaa ulaha qoraxda xagaaga iyo ribbada midabka dheer. Tani way fududahay gaar ahaan carruurta yaryar. Kaliya dheji warqado badan oo roodhida leh oo dusha sare ka sarreeya, ka dibna hoos u jiid oo ku rid mashiinka kalluunka iyo ukumaha sare - maalinta xagaaga waa diyaar.
Haddii aad rabto, waxaad udhigi kartaa lafdhiga lafdhabarka waraaqaha, ma jiraan wax xaddidan oo aad malaynayso!
Tinker leh carruurta - alaabta dabiiciga ah
Tinker leh carruurta - cajiinka cusbo
Tinker leh carruurta - Tree of Life
Tinker leh carruurta - DIY
Tinker leh carruurta - calaamadda albaabka
Bacda iskuulka DIY | maalinta koowaad ee dugsiga
DIY carruurta leh - DIY